ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ndị na -ebunye ya - China na -ebuli yinye ndị na -emepụta ihe
Round ígwè njikọ yinye maka 30+ afọ
(onye na -emepụta ihe eji arụ ọrụ ígwè)
Nkwado oku +86-21-31300975
Nkwado email info@scic-chain.com
Ụlọ ihe nkiri na Ụlọ Ọrụ
Iwu dị mma, ebumnuche & ụkpụrụ
Njikwa Ogo Na Ndinye
agbụ njikọ njikọ
eriri njikọ dị larịị
Ogwe ụgbọ elu
Igwe eji ebuli ọkwa ọkwa 80 (G80)
Ọkwa ọkwa 80 (G80)
Igwe eji ebuli ọkwa ọkwa 100 (G100)
Ọkwa 100 (G100) Sling Sling
yinye ịkụ azụ
ụdọ ebu na igwe mbuli elu
Ihe ọkọnọ ahọpụtara
Agbụ agbụ Crosby
AID Mining Chain njikọ
Akụkụ maka Elevator Chave & Conveyor
Injinia na R&D
Akụkọ na Ajụjụ
Nkwado na kọntaktị
Ọkwa ọkwa 100 (G100)
SCIC ọkwa 100 (G100) slings chain (kwa EN 818-4) na-anata nkeonwe ọkwa 100 (G100) na ngwa sitere n'aka ndị nrụpụta ahọpụtara nke na-eme nyocha siri ike, nnwale na asambodo; Na mgbakwunye, onye injinia SCIC na-eme akaebe saịtị na njikwa mma maka ihe niile na-esi ike tupu ịhapụ ya na nnyefe na ụlọ ọrụ yinye SCIC maka imepụta na mgbakọ.
Ọkwa 100 (G100) na -ebuli ụdọ
Ịwelite na ịkwa ụdọ, yinye, agbụ njikọ dị mkpụmkpụ, njikọ njikọ njikọta gburugburu, yinye ọkwa 100, agbụ G100, eriri agbụ, ụdọ agbụ, ASTM A973 / A973M-21 nkọwapụta ọkọlọtọ maka ụdọ ígwè alloy 100.
SCIC klas 80 (G80) slings chain (kwa EN 818-4) na-anabataghị nke ọma ọkwa 80 (G80) na ihe nrụnye sitere n'aka ndị nrụpụta ahọpụtara nke na-eme nyocha siri ike, nnwale na asambodo; Na mgbakwunye, onye injinia SCIC na-eme akaebe saịtị na njikwa mma maka ihe niile na-esi ike tupu ịhapụ ya na nnyefe na ụlọ ọrụ yinye SCIC maka imepụta na mgbakọ.
Ọkwa 80 (G80) na -ebuli ụdọ
Ejiri ụdọ SCIC Grade 80 (G80) maka ibuli elu dị ka ụkpụrụ EN 818-2 si dị, yana nickel chromium molybdenum manganese alloy steel kwa ụkpụrụ DIN 17115; ịgbado ọkụ nke ọma / nlebara anya & ọgwụgwọ ọkụ na-ahụ maka akụrụngwa akụrụngwa gụnyere ike nnwale, ike na-akụda, ịgbatị & ike.
Anyị anaghị akwụsị ịbụ onye na-emepụta njikọ njikọ njikọ gburugburu na China (na-enye kwa afọ ihe karịrị 10,000T), mana rapara na okike na ihe ọhụrụ na-akwụsịghị.
Otu esi ejikọ, nwụnye na Maintena ...
Otu esi edozie ma mezie mbuli elu ...
Kedu ihe bụ mmepe ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọkụ ...
Nkowa dị mkpirikpi nke Njikọ Njikọ.
Chains Njikọ Gburugburu nke P ...